Nagu saabsan - Bolise Co., Xaddidan.
Bolise Co., Xaddidan. waa ISO 9000: 2001, GMP, Kosher soo saare shahaado ka qaatay soosaarka dhirta, midabada cunada dabiiciga ah, walxaha dabiiciga u ilaaliya iyo maaddada dawooyinka oo leh taariikh 10 sano ka badan. Waxaan inta badan u heellannahay iibinta caannimada iyo cilmi baarista iyo adeegyada wax soo saarka dabiiciga ah, waxaanna dhiirrigelinnaa horumarinta warshadaha dhirta dabiiciga ah.
Ku shaqeynta fikradda ah "Xirfad, Aaminaad, Qiime", mugga iibkeennu si joogto ah ayuu u kordhayaa. Wax soo saarkayaga waxaa laga iibiyey in ka badan 50 waddan, gaar ahaan Ameerika, Yurub, Aasiya.
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa asxaabta adduunka oo dhan si ay ugala hadlaan ganacsiga. Ka dib, waxaan sii wadi doonnaa horumarinta iyo kor u qaadista ganacsiga si loo wada faa'iideysto iyadoo lala kaashanayo maareynteena saxda ah, tayada wanaagsan, adeegga aadka u wanaagsan iyo qiimaha tartanka.
Bolise Co., Xaddidan. waa soo saare xirfadle ah isla markaana dhoofisa soo saaraya noocyo badan oo dhirta laga soo saaro iyo walxaha daawada, Ka dib markii la horumariyo muddo ka badan toban sano, waxaan sameynay faa'iido 4-weyn sida soo socota:
1. Isha Dhirta
Shirkadeenu waa mid ka mid ah wakiilada Ururka Waxyaabaha Dhirta ee Shiinaha oo leh illaha ceyriinka dhirta ugu fiican, hubinta tayada alaabta ceeriin.
Waxaan ilaalineynaa iskaashiga muddada-dheer Mac-hadyada Cilmi-baarista Bayoolajiga ee Akadeemiyadda Sayniska ee Shiinaha, Jaamacadda Beijing, Jaamacadda Zhejiang, Jaamacadda Najing si loo hubiyo tayada iyo teknoolojiyada horumarsan.
Waxyaabaha ku jira maaddooyinka firfircoon waa inay si adag u baaraan HPLC, GC iyo UV ， iyagoo hubinaya waxa ku jira oo dhan.
Balanteenu waa cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka dabiiciga ah, haddii aad wax baahi ah qabtid, ku soo dhawow emaylka [emailka waa la ilaaliyay], waa inaan kuu buuxnaa adiga.